Madaxweyne Xasan oo ka laabtay Dhuusa Mareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo labadii habeen ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud ayaa socdaalkiisa soo afjaray, wuxuuna ku laabtay Muqdisho.
Madaxweynaha intii uu joogey Dhuusamareeb waxa uu kulamo gooni gooni ah la yeeshey, salaadiin iyo ergooyin ka kala socda beelaha gobollada dhexe, iyadoo laga wada hadlay halka lagu qabanayo shirka maamulka loogu dhisayo gobollada dhexe.
War laga sii daayey warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergooyinka ay isku afgarteen in la dhaqaajiyo shirka lagu dhisayo dowlad goboleedka degaannada gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Warka laguma sheegin qodobo rasmi ah oo ay labada dhinac isla garteen, iyadoo muran ka taagnaa in shirka lagu qabanayo Dhuusa Mareeb ama Cadaado.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in madaxweynaha iyo ergada shirka dhismaha maamulka Gobollada Dhexe ee Dhuusamarreeb ka socda ay isku af garan waayeen goobta rasmiga ah ee lagu qabanayo shirka dhismaha maamulka.
Madaxweynaha ayaa doonaya in shirka lagu qabto magaalada Cadaado ee xarunta u ah maamulka Ximan iyo Xeeb, halka inta badan ergooyinka ka qeyb-galay shirka dib u heshiisiinta ee Dhuusamarreeb ay ku adkaysanayaan in wajiga labaad ee shirka lagu qabto isla magaalada Dhuusamarreeb.
Madaxweynaha ayaa horey u iclaamiyay in shirka dhismaha maamulka Gobollada Dhexe lagu qabto magaalada Cadaado, balse waxaa arrintaasi ka hor yimid inta badan ka qeyb-galay shirka dib u heshiisiinta beelaha dega gobolladaas.